50W Ukukhanya kweGaraji lokuLungisa ngeShukumo seMoto China Manufacturer
Inkcazo:I-Garage Light Motion Sensor,Ukukhanya kweGaraji kunye neSentiver sensor,Iigaraji zeLed Light Fixtures
Home > Imveliso > Ukukhanya kwe-LED ye-Canopy > 60w Led Canopy Light > 50W Ukukhanya kweGaraji lokuLungisa ngeShukumo seMoto
I-Sensor ye- Garage Light Motion ye- LED Powered LED Unobumba obuphezulu be-LED kunye ne-Philips LUMILED ezinezikhanyiso ezinkulu. Ukukhanya koGaraji kunye neSensor Motion kuludwe lwe- ETL oluthetha ukuba ezi ziGaraji zokuLungisa ukuKhanya kweGaraji zihamba kunye newaranti yesi-5. Olu tshintsho olumandla olumandla lokugada igalaji ukubonelela ngokukhanya okufanayo, okuyiyona nto ikhuselekileyo yamehlo.
Kwakhona, akukho IR okanye i-UV kwisigxina. Le ndawo yokutshintshela i-bulb light bulb unikezelo olulula kunye nokusebenza.
Ukongeza kwezibonelelo ezininzi ezongezelelweyo, ukubeka ukukhanyisa igalaji kunika into efanelekileyo efana ne "Start Instant," kwaye akukho nanye yeFlickering ecasulayo okanye i-Humming ufumana ezinye izixhobo zokukhanyisa zangaphandle. Ngaphezu koko, yethu 50w yokukhanya kwegaraji ukubonelela nge-Eco-Friendly lighting; ngexabiso eliphantsi, ngaphandle kweMercury.
I-Garage Light Motion Sensor Ukukhanya kweGaraji kunye neSentiver sensor Iigaraji zeLed Light Fixtures I-Garage Light Sensor I-High Bay Lighting Motion Sensor I-High Bay Motion Sensor I-Wall Led Pack Motion Sensor Sensor Motion Sensor